Olee otú Tinye osise na iTunes
> Resource> iTunes> Olee Otú M Pụrụ Tinye sere My iTunes Library
Dijitalụ music na ị ịzụta si music ụlọ ahịa dị ka iTunes ma ọ bụ Amazon MP3 ga-abịa na artworks. Ma, olee otú ọtụtụ ugboro nwere ị dọwara a CD na iTunes ma ọ bụ Ndekọ music si gụgharia music saịtị naanị ịhụ mba artwork ma ọ bụ na-ezighị ezi nkà akasiakde ị na ihu? Nke ahụ pụrụ ịbụ na-agbawa obi.
The ozi ọma bụ na iTunes n'onwe ya a na-akwanyere ùgwù ọrụ nke nbudata artwork, ma e nwere bụ mgbe a ole na ole songs ma ọ bụ albums na njem ya elu. Ihe ka njọ, i nwere ike mkpa ịrụ "Sinụ Album osise" aka nke ọ bụla song otu otu.
N'ihi ya, bụ na e nwere ụzọ dị mfe iji tinye artwork gị nnukwu music collection na iTunes? Dabara nke ọma, azịza ya bụ ee. The Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) nwere ike na-akpaghị aka chọta artwork n'ihi na gị iTunes Ọbá akwụkwọ na mgbe ahụ, ị nwere ike mfe embed sere music faịlụ na-n'ebe nile. Chọrọ nwere a na-agbalị ugbu a? Ka anyị hụ n'okpuru a zuru ezu nkuzi.
1 Tinye gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ka usoro ihe omume
Mbụ, i kwesịrị ibudata a omume na wụnye ya na gị Mac. Wee mepee omume nke ga-akpaghị aka iṅomi ma mbubata gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes. Na programmụ a ga-eme scanning oge ọ bụla ọ na ulo oru.
2 Chọta artworks nile music
Gaa nkụnye eji isi mee nke bụ isi window. Mgbe ahụ ego igbe kpọrọ Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi bọtịnụ. Na otú ahụ, a usoro ga-amalite ịhụ niile ọmụma maka iTunes music, gụnyere artists, track nkọwa, lyrics na N'ezie artworks.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị ego igbe kpọrọ Chọọ maka duplicated Songs, a usoro nwekwara ike ịchọta duplicates gị iTunes na i nwere ike ikpebi nke otu onye ịkwaga ahịhịa.
3 Tinye artworks niile music faịlụ
Họrọ a song na ego ọhụrụ hụrụ artwork na nri n'igbe. Wee pịa Mee bọtịnụ embed artwork ka music faịlụ. Ị nwere ike họrọ ọtụtụ songs na esepu ma na-etinye n'otu oge.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe artwork site onwe gị, ị nwere ike mfe ime ya a usoro. Pịa Dezie icon na nri n'igbe na ịdọrọ a Obodo image faịlụ ka album nkà ebe. Mgbe ahụ ọ mere.
Ikike tinye album artwork ka otutu songs na oge bụ ihe a usoro atụmatụ. Ị nwere ike inye ya a laa na-ekpe ikpe onwe gị na ị na-aga hụrụ ya n'anya.
Machiini ọcha na hazie gị iTunes music n'ọbá akwụkwọ
Olee otú Kpido Your Songs na iTunes